"FANANTENANA HO AN'ANTANANARIVO" - HOPE FOR TANANARIVE | ADVANTISTA Federasiona Madagasikara Afovoany
DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA : Fitondrana am-bavaka sy Fanomanana FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO
EFA ANDRO TOKONY HAMPISEHOAN’I JEHOVAH NY HERINY IZAO.
FIANTOMBOHAN’NY TAONA MIAVAKA SATRIA TAONAN’NY ASA-FITORIANA TANTERAKA ITY TAONA 2019 ITY.
Ny Alahady faha-06 Janoary 2019 teo no niarahana tamin’ireo loholona, filohan-tsampana ary ny pasitoran’ny distrika, teto Mandrosoa ny maraina ary Soamanandrariny kosa ny folakandro.
FIAINGANA MIARAKA, narahina fiofanana sy fitolomana am-bavaka, notarihin’ny Mpitantan’Asa eo anivon’ny FMC, niarahana tamin’i Pasitora Ratsarasaotra Paul sy ireo filohan’ny departemanta samihafa.
– Aoka hahay hanisa ny andro ka hiaina toy ny hoe izao no fotoana sisa ahavelomana
– Aza mamilafila an’Andriamanitra amin’ny Asa niantsoany antsika. (Raisintsika ho Tombontsoa aza ny nampidiriny antsika ho mpiasa ao anatin’izao asany izao, fa vitan’Andriamanitra ny naniraka Anjely sy nampiteny ny vato kanefa dia tiany isika hanao ny asany.)
– Aoka hanaiky fa plan’Andriamanitra ny hamitana faingana ny Asany, tiany ho voavonjy ny olona rehetra eto Antananarivo, ary hoavy faingana izy, ho vitaina faingana ny asa satria efa dodona isika.
HANEHO ZAVATRA MAHAGAGA JEHOVAH AMIN’NY ALALAN’NY MAMBRA TSIRAIRAY AVY. HANOHY NY ASAN’NY APOSTOLY ISIKA…HIROTSAKA NY RANONORANA FARANY…
Naneho statistika mahakasika ny isan’ny mambra advantista isaky ny distrika raha oharina amin’ny isan’ny mponina ny filohan’ny Federasiona Madagasikara Afovoany, pasitora Andriamparatiana Fanera.
Hita ary fa mbola maro ny ezaka tokony ho tratrarina eto amin’ny FMC. Nomarihiny tamin’izany fa misy « Communes 50 » izay mbola tsy nidiran’ny hafatra mihitsy ka tsy maintsy hanatratra ireo isika. Nanamafy ny fomba fiasan’i Kristy amin’ny Vondrona koa ny filohan’ny FMC raha nilaza ny TAMI sy ny CARTIER izy, ary namafisina fa izany no fomba mahomby indrindra sy voalazan’ny fanahin’ny faminaniana fa hamitana izao asa izao. Noho izany koa dia hitsidika eto Madagasikara ny Tompon’Andraikitra voalohany momba ny « One Day Church » na ny fiangonana vita indray andro. Mino isika hoy i Pasitora Andriamparatiana Fanera fa na isaky ny Fokontany aza no hananganana Sekoly-Sabata zanany dia ho vitantsika izany, Izany rehetra izany dia eo ambany fiahian’ilay Tompontsika izay Tompon’izao Asa Izao.
Ny Departemanta samihafa kosa dia naneho ireo tondro-zotra izay tokony harahan’ny sampana tsirairay avy, Iangaviana ary isika rehetra hanaraka ny « Circulaires » mba samy hiara-hiainga avokoa ao anatin’izao ezaka izao.
HATOMBOKA AMIN’NY 10ANDROM-BAVAKA IZAO HETSIKA IZAO NY 09-19 JANOARY 2019. Ka tanterahina isaky ny TAMI na koa vondrona any amin’ny quartier ny 10 andro fiaraha-mivavaka
REACH UP —> REACH IN —> REACH OUT
17 Avril 2020 : Tolo-tanana ho an’ireo olona sahirana miisa 700 tetsy amin’ny EPP Nanisana.